Faanaan Diddaa Barattoota Oromoo Jallisee Gabaase.
Date: December 4, 2015Author: Oromedia 0 Comments
Naannoo Oromiyaa dhaabbilee baruumsaa tokko tokko keessatti jeeqamsi tibbana ka’e irra jiraan too’annoo jala ooleera-Komishiinii poolisii Oromiyaa
Finfinnee Sadaasa 22,2008(FBC) Komishiiniin poolisii Oromiyaa dhaabbilee baruumsaa tokko tokko keessatti jeeqamsi tibbana ka’e irra jiraan too’annoo jala akka oole beeksiseera.
Komishinarri koomishiinii poolisii Oromiyaa Ibraahim Haajii galgala kana Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti akka himanitti jeeqamsi Yuuniivarstii Haromaayaa,Madda walaabuu akkasumas shawaa lixaafi Wallagga lixaa manneen baruumsa sadarkaa 2ffaa tokko tokkotti humnoota farra Nagaatiin jeeqamsi mudate carraaqqii humnoota tasgabbiifi jiraattoota naanichaatiin too’annoo jala oolfameera.
Jeeqamsawwan ka’aniifi kanas too’annoo jala oolchuuf carraaqqii taasifamaa ture keessatti qaama Namaafi qabeenyarra miidhaan akka ga’e komishinar Ibraahiim beeksisaniiru.
Godina Wallagga lixaa aanaa Gullisoofi shawaa lixaa aanaa Toleetti barattooni 3 jeeqamsa uumameen lubbuun isaanii akka darbe himaniiru.
Kana malees barattoota 3fi poolisoota jaharra balaan madaa’uu akka ga’e komishanirichi himaniiru.
Jeeqamsi kun humnoota misoomaafi guddina biyya keenyaa hin barnaanneen akka ajandaatti qabamee dhaabbilee barumsaatti fayyadamuuf yaaluu isaaniitiin kan uumame akka ta’e komishinar Ibraahiim dubbataniiru.
Walumaagalattis garuu hanga ammaatti jeeqamsi mudate too’annoo mootummaatiin ala akka hin taane himan.
Manneen baruumsaa godina Wallagga lixaa tokko tokkotti dhiibbaa humnoota farra Nagaatiin carraaqqiin jeeqamsa uumuuf taasisan kan hubatamu waan ta’eef iddoowwan kanatti hojiin ol’aantummaa seeraa kabajsiisu akka hojjetamus beeksisaniiru.
Hanga ammaattis jiraattoonni naannoowwan eeramanii humnoota tasgabbii wajjin qindaa’uudhaan ol’aantummaa seeraa kabajsiisuuf deeggarsa taasisaniif koomishinarichi galateeffataniiru.
Previous Previous post: የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ልዩ ዞን ማ ስተር ፕላን ላይ ተቃውሞ አሰሙ
Next Next post: Ibsa ejjannoo mootummaa naanoo Oromiyaa haala yeroo irratti kenname